3 Sababood oo aan Boggeyga internetka ugu marti geliyo ReadyTalk | Martech Zone
Khamiis, May 3, 2012 Talaado, Juun 4, 2013 Isaaq Pellerin
Markii hore ayaa lay baray ReadyTalk ka dib markii uu ku dhex milmay webka 'GoToWebinar'. Waxaan ku lahaa 3 martida show ka Denver, San Francisco, iyo London. In ka badan 200 oo kaqeybgalayaal bukaan-socod iyo sharaf leh ayaa halkaa ku laalaaday sidii aan ula macaamili jirnay maqal iyo muuqaal ballaaran. Marka waxaan u baahday inaan helo adeeg bixiye leh kaabayaasha saxda ah ee taageeraya baahiyaha soo-jeediyaha iyo ka-qaybgalayaasha. Tani waa halka ReadyTalk uu ku fiican yahay.
Khibradda Soo-Jeediyaha: A ReadyTalk Webinar wuxuu leeyahay khad u heellan soo-bandhigayaasha oo lagu sii daayo khadka ka-qaybgalayaasha. Tani waxay u oggolaaneysaa inay dhex galaan midba midka kale iyada oo aan dib-u-dhac dheer ku imaanin qadka oo buuxa. Bogagga waxaa lagu soo dhejin karaa server-ka ReadyTalk sidaa darteed soo-bandhige kasta wuu hormarin karaa boodhka.
Caawinta Hawl wadeenka: Haddii aad heli doontid tiro badan oo kaqeybgalayaal ah, ReadyTalk ayaa ku siin kara caawimaad wadaha. Hawlwadeenkani wuxuu ka jawaabayaa codsiyada taageerada farsamo ee dhagaystayaasha. Tani waxay gacan ka geysaneysaa buuxinta baahiyaha degdegga ah ee dhagaystayaasha iyada oo aan la kala goyn socodka wadahadalka lala yeelanayo soo-jeediyaasha.
Duubista fudud iyo Tifatirka: ReadyTalk wuxuu ku siinayaa inaad marin u hesho duubista isla markaaba dhacdada ka dib oo uu leeyahay tifaftire oo kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh u xajisid websaydhkaaga oo aad ku dhex gasho boggaaga. ReadyTalk waxay isticmaashaa qaab caadi ah oo lagu duubo websaydhkaaga. Tani waxay ka dhigan tahay inaadan saacado ku beddeleyn doonin qaab muuqaal ah oo fiidiyoow ah oo aad u isticmaali karto (Haddii aad waligaa ku jirtay tafatirka dhammaadka webinar, waad ogtahay inta jeer ee tani badbaadinayso)
Marka laga eego dhinaca suuq geynta, ReadyTalk qaabka iyo API waa mid adag oo diyaar u ah isdhexgalka sidoo kale. Gudaha suuq-geynta suuqa, dhalinta waxqabadka sida websaydhka ayaa muhiim ah tan iyo markii ficil kaas oo kale ah uu saameyn weyn ku yeelan karo haddii booqde ay u badan tahay inuu macaamil noqdo.
Noocyadeenna waxaa saameyn ku leh waayo-aragnimada aan siinno rajadayada iyo macaamiisheena. Waxaa muhiim ah in lagu kalsoonaado tikniyoolajiyadda aan u adeegsanno si aan u gaarsiino waxyaabaha ku qasbaya ee aan ugu dadaalno abuurista. Oh… iyo haddii taasi aysan ku filnayn, barnaamijka 'ReadyTalk' ayaa la midoobaya Salesforce:
Iyo sidoo kale Eloqua:
Tags: codkarnimogotowbinarSuuqgeynta Webinardiyaarsoaptalktalkiibin
Isaac Pellerin waa Suuqa Canshuuraha ee TinderBox, softiweer ahaan Adeeg ahaan wuxuu sahlayaa abuuritaanka, maaraynta, iyo raad-raaca soo-jeedinta is-dhexgalka. Wuxuu jecel yahay sheeko wanaagsan wuxuuna ku raaxeeyaa ka shaqeynta si loo xoojiyo habka shirkadaha ula macaamilaan rajadooda iyo macaamiishooda. Wuxuu aaminsan yahay in suuq-geynta iyo iibintu ay yihiin kuwa ugu fiican markay yeeshaan himilooyin iyo jaangooyooyin.